Waa Kan Goolhayaha Cusub Ee Liverpool Lasoo Saxaanayso, Una Ciyaari Doona Kulanka Everton Ee Sabtida - Gool24.Net
Waa Kan Goolhayaha Cusub Ee Liverpool Lasoo Saxaanayso, Una Ciyaari Doona Kulanka Everton Ee Sabtida
Kooxda koubadda cagta Liverpool ayaa u dhaqaaqday saxeexa goolhayihii kusii simi lahaa inta uu dhaawaca kasoo noqonayo Alisson Becker, kaas oo ay hawlgalkiisa bilaabeen markii ay Aston Villa ku garaacday kulankii ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa waxa muddo ka maqnaan doona Alisson Becker oo garabka ka dhaawacmay xilli uu tababar la samaynayay ciyaartoyda kale ee kooxda, waxaana la sheegay in aanu garoomada iman doonin muddo lix toddobaad ah, ayna suurtogal tahay inuu maro qalliin sii dheerayn kara muddada uu garoomada ka maqnaanayo.
Sida ay warbaahinta Ingiriiska qaarkeed ku warrantay, tababare Jurgen Klopp ayaa doonaya inuu lasoo saxeexo goolhayaha kooxda Stoke City ee Jack Butland oo tan iyo bishii July aan u ciyaarin kooxdaas.
Goolhayahan ayaa waxa kaydka ay u dirtay kooxdiisa Stoke City markii ay Leeds United ku garaacday 5-0 dhamaadka xili ciyaareedkii hore, waxaana laga door biday Adam Davies oo hadda si joogto ah u ciyaara.
27 jirkan reer England oo mar lagu tilmaami jiray inuu yahay goolhayaha mustaqbalka ee xulka, ayaa waxa heshiiskiisa Stoke City ka hadhsan wax ka yar 12 bilood, waxaanay Liverpool doonaysaa inay lasoo saxeexato inta lagu jiro bishan October ee ay haysato fursadda ay kula soo wareegi karayso laacibiinta kooxaha heerka labaad.
Sharciga ayaa u ogolaanaya kooxaha Premier League inay ciyaartooyo kala soo saxeexan karayaan heerka labaad ee Championship-ka inta ka horreysa Jimcaha soo socda, taas oo ay tahay in Reds ay si adag uga hawlgasho inay ku dhamaystiraan heshiiska Jack Butland inta aanu waqtigu ka dhicin.
Tababare Jurgen Klopp ayaan kalsooni badan ku qabin Adrian kaddib kulankii Aston Villa ay toddobada gool ka dhalisay oo uu qaladaad badan sameeyey.
Haddii ay Jack Butland heshiiskiisa kusoo guuleysato, waxa uu safan karaa ciyaarta Merseyside derby ee Everton ay ku ballansan yihiin Goodison Park maalinta Sabtida ee foodda inagu soo haysa.